OED COVID-19 | Waan Kireysaneynaa - Maanta Codso!
Waan Kireysaneynaa - Maanta Codso!
Waaxda Shaqaalaha ee Waaxda Shaqaalaha Oregon waxay si dadaal ku dheehan i soo jiiteen, u kireystaan, u hormariyaan oo u ceshtaan shaqaale kala duwan, karti leh, oo dhiiran.
Waan kireysaneynaa! Ka codso onleenka maanta oo boosaska xiggo:
Garsooraha Shaqada (Muddo Xadidan)
Taqasuska Sheegashooyinka (Taqasuska Ganacsiga iyo Shaqada 1) - Boosas Muddo Xadidan oo Badan
Soo dhaweeyaha Ololaha (Wakiilka Adeega Bulshada 2)
Xiriiriyaha Dhageysiga (Xoghayaha Sharciga)
Maxaad Halkaan uga Shaqeyneysaa?
U shaqeynta Waaxda Shaqaalaha aad ayay uga badantahay shaqo. Waa fursad isbadel loogu sameynayo noloshaada gaarka ah iyo nolosha dadka kaa ag dhow.
Dheelitirka Nolosha Shaqada (waqtiga fasaxa la bixiyay, 10 fasax, 3 maalmood gaar ah, faa’idooyinka curyaannimada muddada gaaban ama dheer)
Daryeel Nafsadaada iyo Qoyskaaga (faa’idooyinka shaqaalaha dhameystiran, dooqa qorshooyinka caafimaadka, qorshaha hamilada, caymiska nolosha, dabacsanaanta daryeelka canuga balaarinta akoonka, oo xarunta jirdhisnaanta aaga, barnaamijka caawinta shaqaalaha)
U dabaal dag Gaar ahaanshaha: Kala duwanaanshaha iyo ku darista waa aasaaska qiyamyadeena. Waan aqoonsannahay in kala duwanaanshaha iyo ku darista ay muhiim ka tahay hormarinta shaqaalaha xirfadeysan, waxqabad sareeyo oo ay ka go’antahay bixinta jawi shaqo taageero leh oo shaqaalaha oo dhan ay ku kobci karaan iyo gaarista filashadooda buuxdo. Waxaan ku dadaalnaa joogteynta dhaqan soo jiito, oo hormariyo iyo ceshto shaqaale kala duwan oo si dhow u kormeero dagayaasha bulshadeena. Waxaan ka baranay oo aan ixtiraamnaa dhaqamada oo aan ka shaqeyno oona qiimeyno gaar ahaanshaha xirfada shaqsiga, waaya aragnimooyinka iyo afkaaraha. Fiiri jaheynta maamulayaasheena kireysiga ku isticmaalaan websaydka xiggo: Fiiri Su’aalaha Sinnaanta iyo Ku darista ee La isticmaalay Inta lagu jiro Shaqaaleysiinta. Fadlan wax badan ka aqri Aqoonsigeena Jinsiga iyo Nidaamka Muujinta!
Maalgeli mustaqbalkaaga: (Qorshaha howlgabka, magdhowga dambe, qorshaha curyaannimada muddada gaaban iyo dheer, dabacsanaanta lagu isticmaalayo akoonada oo daryeelka caafimaadka iyo daryeelka lagu tiirsanyahay)
Ka mahad celinaa (dhacdooyinka aqoonsiga shaqaalaha, wada cunista sannadlaha, shaqaalaha saameynta leh oo sameynayo shaqo saameyn leh)
ADA: Waaxda Shaqada Oregon, waan qiimeynaa bulshada iyo kobcinta dareen lahaansho oo shaqaalaheena iyo codsyadaasa. Way naga go’antaahy inaan siino hoy macquul ah ee goobta shaqada sababtoo ah waxay ku darayaan qiyamyadaan, sidoo kale sida mabda’eena shaqeynta ee sare u qaadida jawi wanaagsan, badbaado ah, iyo waxbarasho leh. Hoy macquul waxaa loo codsan karaa curyaannimada; xadeynada la xiriiro uurka, dhalashada canuga, ama xaalada caafimaadka ee la xiriirto; diinta; iyo rabashada qoyska, weerarka galmada, daba socodka, ama dhibaateynta. Guud ahaan, hoy macquul ah waxaa loola jeedaa isbadel ama saxitaan shaqo ama jawiga shaqo. Hoy macquul ah waxaa lagu codsan kartaa xaalad walba ee nidaamka shaqada. Tan waxaa ku jiri karo inta lagu jiro shaqaaleysiinta, tababarka, edbinta, ama badelka caafimaadka ama jawiga shaqada, iwm. Codsi walba oo hoy macquul ah waxaa loo sheegayaa si cadaalad ah oo ixtiraamsan iyo inta lagu jiro qiimeyn la gaareeyay iyo nidaam isdhaxgal ah. Ka aargoosiga shaqaalaha ama codsadaha codsanayo ama wax ka weydiinayo hoyga waa ka mamnuuc, iyo aargoosiga laga shakiyay waa in lagu soo wargeliyaa Waaxda Shaqaalaha ama maamulaha.
Qiimeynada: Waaxda Shaqada waxay abuuraan dhaqan waxbarasho joogta ah. Boosaska qaarkood waxay u baahanyihiin dhamesytirka qiimeynta onleenka sida ka qeyb ah nidaamka shaqaaleysiinta. Haddii qiimeyn looga baahanyahay booska waxaa laguugu soo ogeysiinayaa i-meel ahaan. Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan qiimeynada fadlan aqri dokumintigeena FAQ.
Waaxda Shaqada waxaa ka go’an inuu hogaan yahay oo lagu siinayo shaqaalahooda fursado shaqo cadaalad ah oo simman oo ay aqoonsataa sida hab dhaanka ugu wanaagsanbest ee sinnaanta iyo ku darista, xeerarka baaritaanka taariiqda dambiga waxay la xiriireysaa shaqada oo ay waafaqsantahay muhiimada ganacsiga.
Hay'ada waxaa kaliya oo ay tixgelineysaa warbixinta ka imaaneyso afarta sanno ee la soo dhaafay (ka bilow taariiqda xiritaanka) wixii xadgudubyada rabashada aan laheyn iyo todobada sanno ee la soo dhaafay oo xadgudubyada rabashada markii la sameynayo baaritaanka diiwaanadooda dambiga sida waafaqsan Sharciyada Maamulka Oregon (OAR) 125-007-0200 illaa 125-007-0330. Wixii boosaska leh gelitaanka la ansixiyay oo warbixinta Nidaamyada Warbixinta Cadaalada Dambiga FBI (CJIS), diiwaanada dambiga oo gaar ah waxaa sameeyo Booliska Gobolka Oregon. Haddii aad jeclaan laheyd warbixin dheeraad ah oo baaritaanka diiwaanada dambi walba la sameeyay, fadlan Xeerkeena Baaritaanka Diiwaanada Dambiilaha ama xiriirka Xafiiska Waxda Shaqaalaha wixii su’aalo ah.